अमेरिकी चुनाव : उदार र अनुदारबीचको प्रतिस्पर्धा- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक १९, २०७७ दिनेशजंंग शाह
न्युयोर्क — ४५ औं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एवं पूर्वउपराष्ट्रपति जो बाइडेनबीच चुनावी रस्साकसी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । झन्डै २३ करोड मतदाता रहेको महाशक्ति अमेरिकामा चुनावी प्रतिस्पर्धा र नतिजाका लागि निर्णायक मानिने झन्डै एक दर्जन राज्यहरूमा केन्द्रित छ । करोडौं डलरको विज्ञापनदेखि चुनावी अभियान यिनै राज्यमा केन्द्रित छ ।
उदार र अनुदारबीचको यो निर्वाचनलाई अमेरिकी इतिहासमै निकै पृथक् मानिएको छ । अमेरिकामा मात्र नभएर संसारकै अत्यधिक चासो अडिएको छ । पृथक् हुनुमा यो निर्वाचनसँग विविध आयामहरू जोडिएका छन् । कोरोना भाइरस र झन्डै अढाई लाख अमेरिकीको मृत्यु यो चुनावको जल्दोबल्दो एजेन्डा हो । विश्वको ठूलो अर्थतन्त्रमा लाखौंको बेरोजगारी एवं ठप्प अर्थतन्त्र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
मतदानबारे अमेरिकी विगतको एउटा स्पष्ट चित्र छ, आन्तरिक झमेलाको समयमा मतदानमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन्छ । अश्वेतहरूलाई मतदान प्रक्रियामा ल्याएको समय अर्थात् गृहयुद्धपछिको अमेरिकामा (सन १८७० ताका) कीर्तिमानी मतदान भएको थियो ।
तर सन् १९७० र अहिलेको धेरै बदलाब छ । अल्पसंख्यकको जनसंख्यामा उल्लेखनीय बढावा भएको छ भने ट्रम्पको दाबीविपरीत अश्वेत एवं अल्पसंख्यकको हक अधिकार एवं सुरक्षासम्बन्धी प्रदर्शनमा अधिकांश अमेरिकीको सर्मथन रहेको सर्वेक्षणले देखाउँछ । विश्लेषकहरूको भनाइमा मिनियापोलिसमा प्रहरीको ज्यादतीले मारिएका जर्ज फ्लोयडको विरोधमा अमेरिकामा भएको प्रदर्शन सन् १९६० को सिलिभ राइट्स मुभमेन्ट र भियतनाम युद्धताकाको प्रदर्शनपछिको ठूलो हो । यो निर्वाचनले प्रदर्शनकारीको त्यो एजेन्डा बोकेको छ, अमेरिका श्वेत मात्रको देश हो कि सबैको ?
आफ्नो झन्डै पाँच दशकको राजनीतिक जीवनमा राष्ट्रपति बन्न तेस्रो पटक प्रयास गरिरहेका डेमोक््रयाट बाइडेनले मध्यमार्गी राजनीतिको अवलम्बन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन । ३२ वर्षअघि नै बाइडेनले राष्ट्रपति बन्ने अभियान गरेका थिए । बेलायती नेताको भाषण चोरीको आरोप लागेपछि पछि हटेका उनी अमेरिकी राजनीतिका निकै अनुभवी मानिन्छन् । यसपटकको निर्वाचनमा बाइडेनको मध्यमार्गी राजनीतिले बाजी मार्छ कि ट्रम्प श्वेत अतिवादले ? केही समय पर्खनैपर्छ ।
प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७७ ०६:४३
मालीमा ५० इस्लामिक विद्रोही मारिए
कार्तिक १८, २०७७ एपी
पेरिस — पश्चिम अफ्रिकी मुलुक मालीमा इस्लामिक अतिवादीसँग संघर्षरत फ्रान्सेली सेनाले गरेको पछिल्लो सैन्य कारबाहीमा ५० जनाभन्दा बढी लडाकु मारिएका छन् ।
फ्रान्सकी रक्षामन्त्री फ्लोरेन्स पार्लीले ट्वीट गर्दै फ्रान्सेली सेनाले लडाकुबाट हातहतियार र उपकरण बरामद गरेकोसमेत जनाइन् । उत्तरी मालीमा ड्रोनबाट गरिएको सर्वेक्षणमा शंकास्पद लडाकुहरू मोटरसाइकलमा देखिएपछि कारबाही गरिएको पार्लीले जनाएकी छन् । उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सेनाले पहिले हवाई आक्रमण गरेको र त्यसपछि फ्रान्सेली कमान्डोले स्थलगत कारबाही गरेको थियो ।
यसैबीच, बुर्किना फासो र नाइजरसँग सीमा जोडिएको मालीको सीमावर्ती इलाकामा केही सातादेखि ठूलो सैन्य अभियान जारी रहेको फ्रान्सका एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारीले बताएका छन् । फ्रान्सेली रक्षामन्त्री पार्लीले सोमबार र मंगलबार मालीको राजधानी बामाकोको भ्रमण गरेकी थिइन् । उनले मालीको अन्तरिम सरकारका प्रमुखसँग भेटवार्तासमेत गरेकी थिइन् ।
गत अगस्टमा सैनिक बलमा तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गरिएयता माली भ्रमणमा पुगेकी रक्षामन्त्री पार्लीले जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन गर्न संक्रमणकालीन सरकारसमक्ष आग्रह गरेकी छन् । मालीमा विद्रोहीलाई परास्त गर्न हजारौं फ्रान्सेली सैनिक तैनाथ छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७७ २२:०३